Ndinokuphathana njani ngoxolo isampulu ukwenzela ukuqinisekisa umgangatho?
Malunga isigxina isampula kunye nemali yokuthutha isampuli
3.Uma ubeka umyalelo, siya abuyisele umrhumo isampuli impahla kuwe.
kwiminyaka 3 isiqinisekiso esemgangathweni kubo bonke imifanekiso.
Kutheni na umbala yoqobo ayifani ne umfanekiso show?
Yintoni igama elithi intlawulo?
100% okanye 30% yexabiso xa lilonke kufuneka zihlawulwe phambi kokuba ekhobokisayo, ukwamkela T / T, L / C, PayPal, Western Union njalo njalo.
Yintoni inzuzo yethu?
1.The pricevwith arcade ekumgangatho ophezulu;
2.qualities kukho uzinzo kakhulu kunene;
3.Ordinery kunye amalaphu fashional zibonelelwa apha, akunamsebenzi nokuba yintoni na elikroliweyo, eziprintiweyo, eqinileyo ezidayiweyo, nemali, manzi, mibimbi okanye brozen. Ungafumana nantoni na ofuna, ukuba awunayo thina, siya kuzama konke okusemandleni ethu ukuze bayifune ngenxa yenu;
ulawulo 4.strict kunikezelo nokulungileyo inkonzo yasemva ithengiswa nezitshixo trust kubathengi bethu kulo lonke ihlabathi.
zokwenziwa yesikhumba mveliso engama-10 Okunye 'kunye yoyilo 500 +.
Efanelekileyo phandle, pholstery, ibhegi, zokuhombisa, imoto, izihlangu, isinxibo njalo njalo
Yintoni kwakho zonikezelo?
Yintoni imiqathango zorhwebo kunye ngokoMthetho intlawulo?